Home Members Member Directory
MCIA Member Directory
These are lists of members in state/regional level associations. Members are usually grouped by types of business they specialize in. Contact information for each member can be found in the list. Thank you.
ပြည်နယ်/တိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းများ၏ အသင်းဝင်များစာရင်းကို ဤနေရာတွင် ကြည့်ရှုလေ့လာ နိုင်ပါသည်။ အသင်းဝင် အသီးသီး၏ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား၊ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ၊ ဖုန်း၊ ဝဗ်ဆိုက် လိပ်စာတို့ကိုလည်း စုစည်းထားပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Yangon Region Computer Industry Association)
ဧရာဝတီတိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Ayeyarwady Region Computer Industry Association)
ကရင်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Kayin State Computer Industry Association)
ပဲခူးတိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Bago Region Computer Industry Association)
မကွေးတိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Magway Region Computer Industry Association)
မွန်ပြည်နယ် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Mon State Computer Industry Association)
မန္တလေးတိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Mandalay Region Computer Industry Association)
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Sagaing Region Computer Industry Association)
ရှမ်းပြည်နယ် ကွန်ပျူတာ လုပ်ငန်းရှင် အသင်းဝင်များ
(Shan State Computer Industry Association)
Copyright © 2018. MCIA: Myanmar Computer Industry Association.